Ihe edemede Andre Oentoro na Martech Zone |
Edemede site na Andre Oentro
Andre Oentoro bu onye guzobere Achịcha karịrị, ụlọ ọrụ vidiyo na-emeri mmeri. Ọ na - enyere azụmaahịa bawanye ọnụego ntụgharị, mechie ahịa ndị ọzọ ma nweta ezigbo ROI site na vidiyo na - akọwa (na usoro ahụ).
Kickstarting gị Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi inzọ 3
Wednesday, October 9, 2019 Wednesday, October 9, 2019 Andre Oentro
O nwere ike ịbụ na ị nụla na osisi vaịn na vidiyo bụ ezigbo ego maka azụmaahịa ọ bụla na-achọ imeziwanye ọnụnọ ha n'ịntanetị. Obere vidiyo ndị a dị mma na mmụba ọnụego na-aba ụba n'ihi na ha dị mma na itinye ndị na-ege ntị ma na-eziga ozi dị mgbagwoju anya n'ụzọ dị mma - gịnị agaghị ahụ n'anya? Yabụ, ị na - eche etu ị ga - esi bido mgbasa ozi ahịa vidiyo gị? Mgbasa ozi vidio nwere ike iyi ka nnukwu ọrụ na ị maghị ihe